Kaamirada Samsung Galaxy S11 waxay lahaan doontaa dareemayaal ToF ah | Androidsis
Dhawaan, waxaan ku siinay macluumaadkii ugu horreeyay ee ku saabsan Kaamirada Samsung Galaxy S11. Iyadoo loo marayo isbahaysiga Xiaomi, Waxaan awoodnay inaan helno fikrad ah waxa qaybta sawirka ee calanka soo socda ee qoyska Galaxy S ee reer weyn ee Kuuriya ay noqon karaan.
Waa xaqiiqo muuqata in shirkadda fadhigeedu yahay Kuuriya ay hilibka oo dhan dul dhigeyso waxyaabaha la filayo Samsung Galaxy S11, kaas oo lagu soo bandhigi doono qaab dhismeedka 2020 Mobile World Congress, kaas oo siin doona qorigiisa gaarka ah ee bilowga inta lagu jiro usbuucii hore ee Febraayo. Waxayna umuuqataa in qeybta sawir qaadista ay kamid noqon doonto jibbaarayaasheeda waaweyn.
Kani wuxuu noqon doonaa kamaradda kamaradda Samsung Galaxy S11: dareemayaasha ToF si ay ula yaabto kuwa ay xafiiltamaan
Hadda waxaan la kulannaa xan ama daadasho, marka waa inaad ku qaadataa macluumaadkan tuwayaasha. Laakiin, iyada oo la tixgelinayo in shirkaddu ay garaacdo miisaan culus sida Huawei P30 Pro, iyada oo aan la xusin xaqiiqda ah in soo-saaraha Aasiya uu ku soo bandhigi doono terminaal cusub Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka, ama iPhone-ka cusub ee 11-ka ah, waxaa iska cad in Kaamirada Samsung Galaxy S11 waa inay noqotaa wax lala yaabo.
Waan ognahay inaad u badan tahay inaad fuuli doonto a 108 lens oo megapixel ah. Haa, dareemayaasha ay isla soo saareen Xiaomi oo lagu sii daayay cajiibka Mi Mix Alpha. Hagaag hadda, waxaan ognahay in kamaradda Samsung Galaxy S11 ay dhexgaleyso dhowr dareemayaal ToF ah. Sida laga soo xigtay warbixinno kala duwan, soo saaraha Kuuriya wuxuu kordhinayaa shixnadaha dareemayaasha ToF, si loogu hirgeliyo kamaradaha hore iyo gadaal ee Galaxy S11.
Tallaabadan, waan heli lahaa kor loogu qaado waayo-aragnimada 3D, marka lagu daro inaad awood u yeelan karto inaad si fiican u dhexgasho xaqiiqda dalwaddii iyo kororka. Iyo, waxa fiican: waxay lahaan doontaa wax ka badan tiknoolajiyad ku filan oo ay ku istaagto Face ID-ka, nidaamka furitaanka wajiga ee xoogga leh ee ay xafiiltamaan weyn, Apple
Dhinaca kale, xusuusnow in taleefanku yeelan doono p dhawaan la soo bandhigayExynos 990 chaser, marka lagu daro shaashadda 90 Hz. Hadda, waa inaan sugnaa oo keliya bilowga rasmiga ah ee terminal-ka. In kastoo, ay cadahay in Kaamirada Samsung Galaxy S11 waxay noqon doontaa mid ka mid ah jibbaarayaasheeda waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Kaamirada Samsung Galaxy S11 ayaa ka sareysa kana sareysa
Ha xishoon, Roadcrash.io waa inaad isku dhacdaa dhammaan baabuurta aad awoodid
Vivo IQOO Neo 855: Nooca cusub ee taleefanka